China Assembly nke okokụre ngwaahịa na ọkara okokụre ngwaahịa emepụta na suppliers | P&Q
P & Q nzukọ mmepụta ihe kwagara Haining si Songjiang, Shanghai. Naanị awa 1.5 na-anya ụgbọ ala gaa n'ụlọ ọrụ P&Q Shanghai. Izizi nzukọ a ụlọ ọrụ mmepụta ihe zubere imecha dum Ikanam oriọna nzukọ na-anwụ mgbatị ọkara mmiri nzukọ. Anyị ogbako nwere ike inyere anyị aka ịchịkwa dum nzukọ ọganihu, na-eduga oge.
Zuru ezu adreesị dị ka ndị na-esonụ:
Nke 11 Buildinglọ • Mba. 8 Haining Okporo ụzọ • HAINING, JIAXING • 314400 China
Dị ka akụkụ nke ọrụ njedebe na njedebe nke ọ na-enye ndị na-emepụta ihe, P&Q nwere ike ịme mgbakọ dị iche iche, site na mgbakọ abụọ dị mfe na mgbakọ dị mgbagwoju anya. Usoro nkwenye nke ogo dị iji hụ na ogo ọ bụla nke nzukọ ọ bụla.
P & Q na-enye akwa na mgbakọ dị iche iche e mepụtara iji zute nkọwa nke onye ọ bụla na nnabata maka akụkụ ọ bụla na ndị ahịa ọ bụla. Ndị ahịa na-adabere na P&Q iji chọpụta usoro nrụpụta na usoro nhazi kachasị dị irè, wee mepụta ihe ndị ahụ ma jikwaa usoro ntinye niile, gụnyere njikwa ngwaahịa. Gịnị si na ya pụta? Nọgide na-enwe akwa-akwa akwa na mgbakọ.
Uru nke Mgbakọ Mmepụta
● A na-enyefe akụkụ dị njikere iji
● manufacturing rụpụta arụmọrụ na-arụpụta ọrụ
● Oge ụzọ dị ala
Oge na ego echekwa
Lies Mgbakọ ndị dị mfe ma ọ bụ ndị dị mgbagwoju anya
Ihe eji eme ihe maka Mgbakọ
Mgbakọ, mbukota & nbudata
Dị ka ụkpụrụ ndị anyị jidere si gosi; ISO 9001, P&Q ga - ezukọ, gbakwunye, zipụ ma jikwaa akụrụngwa zuru ezu ma ọ bụ nchịkọta obere ihe. Anyị na-ejide n'aka na enyere ngwaahịa gị na nrụpụta mmepụta gị n'ụzọ ziri ezi na oge ịchọrọ ya.
Nke gara aga: Mpempe akwụkwọ
Osote: Die casting aluminum bulkhead ìhè
Die Nkedo akpụzi
High Pressure Die Nkedo
Light eletrik Die Nkedo
Plastic Ọgwụ na ịkpụzi Parts
Pressure Die Nkedo
Steel mpempe akwụkwọ Metal